Ọgwụ mara mma sitere na Sahara - AFRIKHEPRI
POtu puku afọ, ọgwụgwọ ndị a sitere n'ọzara Sahara bụ usoro ọgwụgwọ ohuru maka spas gburugburu ụwa.
Mmiri Camel: mma na ahụ ike.
Mmiri camel nwere nnukwu ihe nke mineral (iron), vitamin (A, B, C), elastin na lanolin. Ọ na-agụnyekwa lactic acid nke na-eme ka a maliteghachi n'ime ụlọ. Ọ na-enwekwa ahụ iru ala, nri na antioxidant. Ezigbo maka akpụkpọ anụ ma ọ bụ nke nwere iwe. A na-eji mmiri ara ehi eme ihe na ncha, mana enwekwara ude, ntutu isi, nchebe anyanwụ. Ọ bụrụ na e jiri akpụkpọ ahụ mee ihe, ọ bụ site na ịṅụ ya na mmiri ara ehi kamel na-eweta ọtụtụ uru n'ahụ ahụ. Ezi onye òtù ọlụlụ.
Prickly ube mmanụ: Argan ọhụrụ.
Site n'osisi mkpụrụ osisi, a na-etolite mmanụ mmanụ ugwo na desert Moroccan. Mkpụrụ mmanụ prickly mmanụ nwere ọkwa dị mkpa nke abụba bara uru, Omega 6 na omega 9, ma ihe kpatara ya bụ ọdịnaya ya nke vitamin E na delta-7-stigmasterol, ihe dị egwu nke na-egbochi oxydant pụrụ iche na osisi osisi. Ọ na-eweghachi ike na ụda na akpụkpọ ihu ma na-akwalite usoro mmegharị anụ. Ọ nwere mmetụta pụrụ iche nke na-eme agadi. Ezigbo mma, ọ na-eme ka anụ ahụ dị nro ma na-echebe anụahụ. Ọ na-ahapụ akpụkpọ ahụ dị nro na satiny ákwà. Ọ bụkwa ezigbo nlekọta maka scars na crevices.
Nke a dị oké ọnụ ahịa mmanụ, ka nzuzo, bụ a oké njọ osompi na argan mmanụ, bụ ogwu ube mmanụ nwere a udidi ọbụna mma karịa ya "nwa nwanne nna" na ya na-esi ísì nnọọ obere ilu.
Ngwomuta nke oma: n'okpuru aja aja.
Dị ka anyị gosiri na a isiokwu bu ụzọ, psammotherapy (nke a makwaara dịka psammatotherapy) ma ọ bụ ọgwụ aja bụ usoro nna ochie na North Africa. Ọ na-agụnye imikpu ahụ maka ọ dịkarịa ala minit iri na ájá dị n'ọzara iji gbochie rheumatism, arthritis ma ọ bụ lumbago. Dịka na sauna, a na-ewepu toxins ma ahụdụ ahụ dị jụụ. Omume a na-eme ugbu a na ụfọdụ spa. Akpanye akpụkpọ ụkwụ nke na-agba ọkụ na 45 ° na-enye ohere iji kpuchie akụkụ nke nkwụsi ike na oke nke centimeters.
Ihe ndị ọzọ na blog anyị www.panafricanbeauty.com
Fourzọ Anọ Ga-aga Nke Ọma - Wayne Dyer (Audio)